Kedu ihe bụ ndị na-ekpo ọkụ ọkụ na kedu ka ha si arụ ọrụ | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Kedu ihe bụ ndị na-ekpo ọkụ ọkụ na otu ha si arụ ọrụ?
Ọtụtụ ndị nwere ọkụ eletrik n'ụlọ ha ma hụ na njedebe nke ọnwa ka ụgwọ ọkụ eletrik ha si abawanye. Oriri nke ọkụ eletrik metụtara ụdị ọrụ a na-agbapụ ngwa ngwa n'oge oge oyi. Eletrik dị ka usoro kpo oku dị ezigbo mma ma rụọ ọrụ nke ọma, mana a na-ahụta ya dị ka otu kachasị ọnụ ahịa na ahịa. Agbanyeghị, iji zere nsogbu ndị a enwere ndị na-ekpo ọkụ ọkụ.
Gịnị bụ ihe a gbasara ndị na-ekpo ọkụ n’ọkụ? Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịma etu esi echekwa ihe niile enwere ike na ikpo ọkụ, ebe a anyị na-akọwa ihe niile metụtara ndị na-akwakọba ihe. Naanị ị ga-anọgide na-agụ 🙂
1 Kedu ihe bụ ndị na-ekpo ọkụ ọkụ?
2 Sistemụ kpo oku eletrik
3 Accumdị ndị na-ekpo ọkụ n’ọkụ
4 Isi atụmatụ
Kedu ihe bụ ndị na-ekpo ọkụ ọkụ?
Ha bụ ngwaọrụ ndị nwere ọrụ maka ịgbanwe ike eletrik n'ime ike ọkụ na ọnụ ala dị ala. Nke ahụ bụ, site na ọkụ eletrik anyị nwere ike ikpo ụlọ anyị ma na ọnụ ala dị ala karịa na kpo oku kpo oku. Ezubere ha iji rie ike eletrik n'oge oge ọnụego belata. Ọnụego niile na-abịa na nhazi oge ebe ọkụ eletrik dị ọnụ ala. Ngwaọrụ ndị a na-ahụ maka ịgbanwe ike eletrik na oge dị ọnụ ala karịa ụbọchị ma na-agbakọba ya n'ụdị okpomọkụ. Okpom oku a gha adi mgbe ayi choro ya.
Ngwaọrụ ndị a na-eweta oke uru nke iji, ebe ọ bụ na anyị nwere ike iji ikpo ọkụ ha oge ọ bụla anyị chọrọ, anyị ga-ebelata ụgwọ. Na mgbakwunye na nke a, ndị na-ekpo ọkụ okpomọkụ nwere uru ndị ọzọ dị ka:
Enweghi ihe nfu oku n'oge ojiji. Nke a na - eme n'ihi na ha dị nkwadobe iji kwado ike kacha mma achọrọ. Dika adighi echekwa ike karie, odighi efu.
Na-azoputa ike ma na-enye nkasi obi kachasị. Inwe ike mgbe achọrọ ya dị ezigbo mma. Ọ nwere usoro nhazi ibu na oge awa belata iji hụ na nchekwa dị n'etiti 50 na 60%.
Ọ dịghị post-nwụnye mgbanwe chọrọ.
Ọ nwere nhọrọ nke mwekota na usoro nchịkwa dịpụrụ adịpụ.
Nhazi ahụ bụ kọmpat, ya mere, ọ naghị esiri ike ijikọta ya na mma nke ụlọ. Na mgbakwunye, njikwa ya na ndozi ya dị mfe.
Sistemụ kpo oku eletrik
Enwere otutu ndi mmadu etinyela oku n'ime ulo. Ndị ahụ niile ahọrọla ikpo ọkụ, nwere ike ịnụ ụtọ ngwaọrụ dịka:
Mmanụ ma ọ bụ thermoelectric radiators. Ọ bụ otu n'ime ndị nkwakọba ihe kacha ochie dị adị. Ha na-arụ ọrụ site na ikpo ọkụ mmanụ ọkụ. Mgbe nke a mere, ọnọdụ okpomọkụ na-abawanye ka a na-ewepụta okpomọkụ ọnya na mmanụ.
Ala radieshon. Igwe a na-etinye n’okpuru ala bụ nwụnye nke e tinyere netwọkụ nke ọkpọkọ ma ọ bụ eriri ndị na-ebu mmiri ọkụ n’okpuru ala ụlọ ahụ. Nke a na - enyere ala aka ịgbanye ọkụ ma mee ka ọnọdụ okpomọkụ dịkwuo elu n'oge ụbọchị oyi kacha oyi. Ọ ghọwo otu n'ime usoro kachasị ọhụrụ na nke ọma, ọ bụ ezie na ọnụahịa mbụ ya dị elu ma chọọ ọrụ.
Igwe mgbapụta ọkụ Uru nke ụdị accumulator bụ na ọ naghị eri ike. Ihe na-adịghị mma bụ na ọ bụ naanị ụlọ ahụ ka ọ na-ekpo ọkụ. Okpomoku a na-agbasasi ngwa ngwa, ya mere o dighi uru ya.
Efere na-egbuke egbuke. Ha bụ ebili mmiri na-ekpo ọkụ nke na-eme ka okpomoku nke ụlọ ebe a na-etinye ya n'ụzọ homogeneous.
Ndị na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ. Dịka e kwuru, ha bụ ndị na-emegide eletrik na-echekwa okpomọkụ mgbe ọkụ eletrik dị ala ma chekwaa ya.
Ndị na-ebufe ihe. Ha bụ ngwaọrụ ndị nwere ọrụ maka ịbanye ikuku oyi na ịchụpụ ikuku ọkụ site na ụfọdụ ndị na-eguzogide na thermostats ha nwere.
Accumdị ndị na-ekpo ọkụ n’ọkụ
E nwere ụdị igwe ọkụ abụọ dị iche iche nke ndị ahịa nwere ike itinye n’ụlọ ha:
Static. Ihe nlere a nwere ike ịhapụ ike ọkụ n'ụzọ nkịtị. Ọ na-atụ aro na-adịgide adịgide bi ebe ebe ha nkasi obi okpomọkụ bụ mgbe nile.
Di omimi Ha nwere onye ofufe nke na - enyere aka ịnyefe ike. Mwepu nkewapụ ya dị irè karịa nke static. Rollingchịkwa ọkụ nke ike na-enye ha ohere ijikwa okpomọkụ nke mpaghara dị iche iche nke ụlọ.
Iji bulie mmefu akụ na ụba, ihe a na-emekarị bụ ijikọ ụdị abụọ nke ndị na-achịkọta akụ n'ụlọ. A na-etinye ndị static na mpaghara buru ibu ma jiri ndị na-agbanwe agbanwe na-eme ihe na ndị na-adịghị agbanwe agbanwe.
Mgbe ị na-ahọrọ onye nchịkọta kachasị mma maka ihe gbasara akụ na ụba, enwere ike ịsị na ọ dị ike. Nke a bụ n'ihi na ọ na-enye ohere ijikwa ọnụ ahịa yana kesaa ikpo ọkụ n'ime ụlọ dabere na mkpa ọ dị.
Usoro kpo oku nke ndị na-akwakọba ihe nwere ohere nchekwa dị oke. Na-enwe ike chịkọba ume ma debe ya n'ihi na mgbe achọrọ. Enwere ike gbanwee ya ka ọ rụọ ọrụ n'ime oge mgbe ọkụ eletrik dị obere.
Ọ dị mkpa ikwu na ndị na-akwakọba ihe a ga-esonyere ya na mkpuchi dị mma n’ụlọ. Ọ bụrụ na anyị enweghị windo nke ga-eme ka anyị chịkwaa okpomoku ma ọ bụ oyi anyị na-ahapụ ma ọ bụ pụọ n’ime ụlọ ma ọ bụ ihe mkpuchi zuru ezu, ọ ga-aba ezigbo uru.
Ntinye nke ngwaọrụ ndị a dị mfe ma ọ chọghị ọrụ ọ bụla. Ya mmezi bụ nnọọ ala. Ọ chọrọ naanị nhicha kwa afọ na mgbanwe batrị nke chronothermostats.
Ebe ọ bụ na ọ bụghị ihe niile bara uru n'ụdị ngwa eletriki ọ bụla anyị ji, na nke a, anyị ga-ekwupụta ọghọm ọ nwere. A ga-emerịrị ikpo ọkụ a kwakọbara tupu oge eruo. Nke a na - amanye ndị na - azụ ahịa ịme ihe maka mkpa ha. Ọ bụrụ na anyị amaghị ma ọ ga-abụ oyi ma ọ bụ n'oge ọ bụla, anyị enweghị ike iji ya ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ya ozugbo. O nwere ike ime na anyị nwere ọbịbịa anyị na-atụghị anya ya ma anyị enweghị ike ịnye ọkụ n'ihi enweghị ya gbakọtara na mbụ.
Tupu ịmalite inweta ihe nkwakọba ihe, ị kwesịrị ịtụle akụkụ ndị ọzọ dịka:
Ọnụahịa dị elu nke ngwaọrụ ọ bụla. Nke a bụ mbinye ego izizi, agbanyeghị na ọ na - ewe oge.
Ọ bụrụ na ndị na-azụ ahịa nwere tarifu na ịkpa oke awa, a ga-emerịrị ike ọkụ n'abalị.
Enweghi ike ịchịkwa nkwụsị ọkụ.
Na analysis nke akụkụ ndị a, M olileanya na ị nwere ike họrọ gị kpo oku usoro ọma 🙂
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Nchekwa ike » Omenala ulo » Kedu ihe bụ ndị na-ekpo ọkụ ọkụ na otu ha si arụ ọrụ?
Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ngwa nju oyi